Akụkọ - MAMO POWER akpa ihe nrụpụta mmanụ dizel nkịtị
Na June 2022, dị ka onye mmekọ ọrụ nkwukọrịta China, MAMO POWER nke ọma nyefere igwe igwe mmanụ dizel akpa 5 nke ọma na ụlọ ọrụ China Mobile.
Ụdị ọkụ eletrik ahụ gụnyere:mmanụ dizel generator set, usoro nchịkwa nke nwere ọgụgụ isi Centralized, obere voltaji ma ọ bụ nkesa ọkụ eletrik dị elu, usoro ọkụ ọkụ, usoro nchebe ọkụ, mmanụ ọkụ na-enye ọkụ gụnyere tankị mmanụ ọkụ, ụda mkpuchi ụda na usoro mbelata mkpọtụ, usoro mmiri jụrụ oyi, ikuku ikuku na ikuku, wdg. Ha niile ka edobere nrụnye.Igwe ọkụ nkịtị na-eme mkpọtụ nwere arịa ọkọlọtọ dị n'ụkwụ 20, arịa dị elu dị n'ụkwụ 40, wdg.
Ọdụ ọkụ diesel nke na-emechi emechi akpa nke MAMO POWER rụpụtara dị mma nke ukwuu maka ndị ọrụ iji rụọ ọrụ ma lelee ọkwa na-agba ọsọ nke ngalaba ike.A na-edobe ọnụ ụzọ nlele ọrụ na bọtịnụ nkwụsị ihe mberede n'ọnọdụ kabinet na mpụga ụlọ.Onye na-arụ ọrụ adịghị mkpa ịbanye n'ime akpa ahụ, kama ọ kwesịrị ka ọ guzoro n'èzí wee mepee ọnụ ụzọ nlele akpa ka ọ rụọ ọrụ gen-set.Mamo Power Adopt International ama ama ika nwere ọgụgụ isi ụdị, gụnyere Deepsea (dị ka DSE7320, DSE8610) , ComAp (AMF20, AMF25, IG-NT) , Deif, Smartgen, wdg. nkeji ike ịgbachi nkịtị (ngalaba nkeji iri atọ na abụọ nwere ike jikọọ na grid maka nrụpụta ike).Ọ nwekwara ike kwadebere na remote nlekota na ime sistemụ arụmọrụ.Ndị ọrụ nwere ike nyochaa ọnọdụ ịgba ọsọ nke akpa mmanụ dizel generator site na kọmputa dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ netwọk ekwentị mkpanaka yana ọrụ dịpụrụ adịpụ.
The akpan e akpa maka MAMO POWER akpa ụdị generator set nwere ọrụ nke soundproof, mmiri ozuzo, uzuzu-àmà, rustproof, okpomọkụ mkpuchi, fireproof na òké àmà, wdg The containerized gen-set nwere ike ịkwaga na hoisted dị ka a dum, na nwere ike ikpokọta otu n'elu nke ọzọ.Enwere ike iji ụlọ ọrụ ọkụ niile etinyere ya ozugbo maka mbupu mmiri, ọ dịghịkwa mkpa ibunye ya n'ime akpa ọzọ tupu ebuba ya n'ụgbọ mmiri.